KU SAABSAN WIC
Waa maxay WIC?
Waa sidee WIC?
Hubi Hadhaaga Akoonkaaga Intaadan Iibsan
Kaadhkaaga ku qor WICShopper oo dhagsii “Faa'iidooyinkeyga".
Wac Khadka Adeegga Macaamiisha bilaashka ah (1-844-892-3084).
Weydiiso dukaanka dukaanka inuu uxuujiyo kaarkaaga si ay u waydiistaan ​​isu-dheellitirka.
Ka eeg hoosta rasiidkaagii ugu dambeeyay dheelitirkaaga haray.
Gal ku soo gal akoontada ebtEDGE.com ama kujira barnaamijka ebtEDGE.
Weydii xaruntaada WIC ee deegaankaaga inay daabacaan dheelitirkaaga macaashka.
* Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan gargaaradaada WIC ama aad ubaahantahay inaad isbeddelo sameyso, la xiriir rugtaada WIC ee deegaankaaga. Macluumaadka lala xiriirka kiliinikada waxaa laga heli karaa WICShopper, dhagsii “Soo hel xafiiska WIC".
Taabo “Dukaamada WIC”Gudaha WICShopper si aad u hesho dukaanno kuu dhow.
Ka raadi calaamada “WIC Aqbalay Halkaan” meelaha laga soo galo dukaanka.
U dukaamee Cuntooyinkaaga WIC
Iibso waxaad u baahan tahay. Khasab kuguma aha inaad iibsato dhammaan cuntada hal mar.
Fiiro gaar ah u yeelo dheefahaaga jira.
Faa'iidooyin ma u leedahay nonfat ama 1% caano, 2% caano, or caano dhan?
Faa'iidooyin ma u leedahay caano dufanka / caano la'aanta or caano caano?
Waad iibsan kartaa miro kasta iyo khudaar daray ah (oo ay ku jiraan kuwa dabiici ah!) Illaa iyo inta aysan ku jirin maaddooyin kale oo lagu daray sida labiska, dhejiska, nuts, iwm.
Lagu dabaqi karo miraha iyo khudradda KELIYA: Haddii shayga buuxiyo shuruudaha miraha iyo khudradda ee Liiska Cuntada Idaho WIC, waa in lagu bixiyaa diiwaanka. Tani waa run xitaa haddii miro ama qudaar lagu sameeyo baarista "Ma aha sheyga WIC" marka la isticmaalayo WICShopper “Sawirro Barcode"Ama"Fure Gal UPC" Astaamaha.
Had iyo jeer ku bixi kaarkaaga eWIC marka hore, ka dibna SNAP, ka dib noocyada kale ee lacag bixinta (lacag caddaan ah, amaah, deyn).
Ka hor intaadan oggolaanin iibsashada, hubi rasiidkaaga wax iibsiga badhtamaha si aad u hubiso in WIC ay bixinayso dhammaan alaabooyinkaaga WIC.
Haddii aad u adeegsanayso kuubbo shey aan ahayn WIC, waxaa lagugula talinayaa inaad u kala soocto alaabtaada WIC iyo waxyaabaha aan ahayn WIC laba macaamil. U adeegso kuubboonkaaga macaamil xawaalad aan ahayn WIC si aad u hesho sicir-dhimis buuxa.
Hayso risiidhkaaga. Haddii aad dhibaato ku qabtid dukaanka, tani waxay ka caawinaysaa WIC inay xalliso.
Kaararka Idaho WIC looma adeegsan karo gobolada kale.
Macaashku wuxuu dhacayaa 12:00 saqda dhexe maalinta ugu dambeysa bisha.
Faa'iidooyinka aan la isticmaalin dib ugama wareegi doono bisha soo socota.
Kaarkaaga dib ayaa loo isticmaali karaa. Ha tuurin kaarkaaga, xitaa marka dhammaan gargaaradaada la isticmaalay.
Ha u laaban, ha dhigin iftiinka tooska ah ee qorraxdu ku dhacdo, ama agteeda agteeda agtiisa / qalabka elektiroonigga ah.
Kaarkaaga ha ku qorin nambarkaaga PIN.
* Haddii kaarkaagu yahay lumay, xaday ama dhaawacay isla markiiba wac Khadka Adeegga Macaamiisha ee bilaashka ah (1-877-892-3084) si aad u shaqeyso. Kaarka beddelaadda ayaa lagu soo diri karaa adiga oo jooga 5-7 maalmood oo shaqo gudahood. Haddii ay ku jirto 10-ka maalmood ee ugu dambeeya bisha oo aadan sugi karin kaarka beddelaadda boostada, waxaad booqan kartaa rugta caafimaadka ee WIC ee deegaankaaga si aad u hesho kaar cusub.
Ku saabsan lambarkaaga PIN
Kaarkaaga eWIC ma shaqeyn doono illaa PIN la dejiyo.
Dejinta ama badalista PIN waxay u baahan tahay taariikhda haystaha hayaha taariikhda dhalashada iyo lambarka boostada.
Si aad u dejiso ama u beddesho lambarkaaga PIN:
Telefoonka: Ka wac Khadka Adeegga Macaamiisha ee bilaashka ah (1-877-892-3084) oo raac tilmaamaha.
Internetka: Isticmaalka ebtEdge.com ama barnaamijka ebtEDGE
Abuur ama gasho akoonka ebtEDGE
Xulo Akoonkaaga WIC
Guji "Adeegyada Koontada"
Guji “PIN Select”
Waxaad haysataa afar fursadood inaad ku gasho lambarkaaga PIN si sax ah diiwaanka lacagta. Kadib isku day afaraad oo khalad ah, kaarkaaga waa la qufuli doonaa.
Si dhakhso ah ayaad u furi kartaa kaarkaaga adoo kaarkaaga beddalaya PIN. Haddii kale, kaarkaagu si otomaatig ah ayuu u furi doonaa 12:01 AM maalinta ku xigta.
Ha la wadaagin lambarkaaga PIN. Haddii qof ogyahay lambarkaaga PIN, waxay u isticmaali karaan kaarkaaga si ay u helaan kaalmooyinkaaga, manfacyadaas lama beddeli doono.
Immisa kaararka WIC ah ayuu qoysku yeelan karaa?
Qoys walbaa wuxuu lahaan karaa ilaa labo kaar.
Waaliddiinta korinta waxay lahaan doonaan kaar gooni u ah cunug kasta ee korinta ah.
Waa inaad la xiriirtaa shaqaalaha xaruntaada WIC. Had iyo jeer hubso in WIC ay haysato cinwaankaaga hadda boostada iyo koodh sirta ah maxaa yeelay halkaan ayaa laguugu diri doonaa kaararka beddelka boosta.
Maxaan sameeyaa haddii aan u baahdo inaan beddelo gargaarkayga cuntada WIC?
Waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto rugtaada WIC si aad ugala hadasho wixii isbeddelo ah ee suurtogalka ah ee ku yimaada manfacyadaada cuntada.
Faa'iidooyinkaygu miyay u gudbi doonaan bisha soo socota haddii aan la istcimaalin?
Maya, manfacyada cuntada ee WIC ee aan la soo iibsan ayaa dhici doona saqda dhexe habeenka ugu dambeeya bisha.
Maxaan sameeyaa haddii aanan awoodin inaan iibsado shey aan u malaynayo inay WIC oggolaatay?
Hubso Liistada Cuntada Idaho WIC si aad u hubiso in badeecadu buuxisay shuruudaha
Hubi dheelitirkaaga macaashka si aad u hubiso inaad leedahay waxtarka jira
Taabo “Waan iibsan kari waayey! gudaha WICShopper oo buuxi foomka
Sawir ka qaad sheyga oo u dir WICUPC@dhw.idaho.gov dib u eegis Sawirada waa inay kujiraan:
Liiska Waxyaabaha ay ka kooban tahay
Hadaad u maleynaysid inuu dukaanka khalad sameeyay, weydii inaad lahadasho maareeyaha isla markaaba, waxay awoodi karaan inay hagaajiyaan khaladaadka ka hor intaadan ka tagin dukaanka.
Haddii maareeyuhu uusan awoodin inuu hagaajiyo, xafid rasiidkaada oo wac rugtaada WIC, ama wac khadka lacag la'aanta ah ee Adeegyada Macaamiisha (1-844-892-3084) si aad u dalbato cabasho.
Kaarka & PIN
Maxaa dhacaya haddii kaarkayga lumaan, la xado ama waxyeelo soo gaadho?
Haddii kaarkaagu lumo, xado ama dhaawac gaaro, si dhakhso leh u soo sheeg adoo wacaya Khadka Adeegga Macaamiisha lacag la'aanta ah (1-844-892-3084).
Waxaad haysataa afar fursadood inaad ku gasho nambarkaaga saxda ah. Marka afraad isku day kadib koontadaada waa la xiri doonaa.
Haddii aadan xasuusan karin PIN-kaaga ama aad xiraysay koontadaada, wac Khadka Adeegga Macaamiisha lacag-la'aanta ah (1-844-892-3084) ama gal marin loo yaqaan 'ebtEDGE' si aad u beddesho PIN-kaaga.
Koontadaada ayaa si otomaatig ah u furi doonta 12:01 AM maalinta ku xigta.
Lambarkaaga PIN waa lambar afar-lambar ah oo kuu oggolaanaya inaad u isticmaasho kaarkaaga Idaho WIC ee dukaanka raashinka. Kaarkaagu MA shaqeyn doono illaa aad ka xulo lambarkaaga PIN. Xulo afar lambar oo kuu fudud inaad xasuusato, laakiin ku adag qof kale inuu qiyaaso.
Weligaa nambarkaaga cidna ha u sheegin hana ku qorin nambarkaaga PIN kaarkaaga Idaho WIC. Haddii qof ogyahay lambarkaaga PIN, waxay u isticmaali karaan kaarkaaga si ay u helaan kaalmooyinkaaga, manfacyadaas lama beddeli doono.